Isixhobo sokuqala somatshini wokunxibelelanisa umvundla wokuqala we China_ews_Zhongshan Xiangdi Lighting Co, Ltd.
Copyright: Zhongshan Xiangdi Lighting Co, Ltd. 粤 ICP 备 15039807 号Inkxaso yezobugcisa:do35 Imveliso yezorhwebo yamanye amazwe
Isixhobo sokuqala somatshini wokunxibelelanisa umvundla wokuqala wase China
Xa sasisemncinci, sasidla ngokumamela ibali labadala basixelela malunga nenyanga.Yile ngcinga imnandi kakhulu yabantu bakudala kwi-Mid-Autumn festival. Xa sikhulile, siyayazi ukuba i-Armstrong ishiye indawo yokuqala yonyawo emntwini. Abantu babonakala beyoyisa iplanethi, kodwa umbala ocacileyo oqaqambileyo kunye nomnqweno omuhle ubonakala uphela kunye.
I-Changsha IFS China yokuqala ye-jade ye-jade projektha yokusebenzisana
Lo Mbhiyozo we-Mid-Autumn, iNyanga yeSixeko, usaphula isiko, ukungqungqa kwezinto, unamava ohambo olonwabisayo nolonwabisayo lokuya enyangeni. Awunayo ukukhwela inyanga kwaye uye kwi-Changsha IFS ukuqala amava akho eStar City.
Oko kuvulwa i-Changsha IFS, ibijonge ngamehlo athuleyo isitiya somfanekiso we-L7.Yintoni yona? UMthendeleko we-Mid-Autumn, uza kwenza ntoni ekugqibeleni?
Kutheni le nto umvundla oguqukayo ube liqabane lenyanga? Ngokuqinisekileyo yitekhnoloji emnyama! Isixhobo sokuqala sokupeyinta sokukhanya seTshayina se3D isixhobo esisebenzayo kunye namagcisa amaPhuthukezi ngoku sikwi-Intanethi!
U-Changsha IFS wadibana nomculi wamaPhuthukezi uCarole & Nuno ukuzisa isixhobo sokuqala somculo womvundla wokuqala we-jade, ekumema ukuba wenze ingubo entsha enemibala emhlophe yehabhu emhlophe, ukhanyisela uMthendeleko oMnyama we-Mid-art ngobugcisa obutsha beendaba, kwaye uhlangabezana nenkcubeko yasentshona kunye nobugcisa basentshona e-Changsha IFS. Umtsalane.
Itekhnoloji ye-multimedia enamandla ikuvumela ukuba ube ngumculi, kwaye iphepha lomvundla liba ngumthungo .. Unokwandisa ubuchopho bakho kwaye usebenzise iindibaniso ezahlukeneyo zokukhanya kunye nesithunzi ukwenza owakho ukukhanya kunye nesithunzi somvundla.